I-Apple iyaqhubeka nokuhoxisa izicelo ngesicelo sikahulumeni waseChina | Izindaba ze-IPhone
Ukuhoxiswa kwezicelo ezivela e-Chinese App Store, ngokucela kukahulumeni, sekuphele isikhathi eside ukuba yizindaba. Imvamisa, uhulumeni wezwe udinga ukuhoxiswa kwezicelo ezisezigabeni ezithile, kunokuba wenze izicelo ngazodwana.
Kodwa-ke, izindaba zakamuva ezihlobene nokuphathwa kukahulumeni wase-China phezu kwe-App Store, zidonsela ukunakwa okukhethekile, ngoba kuyisicelo esithile. Ngikhuluma ngohlelo lokusebenza lwe-Quran Majeed Pro lelo ivumela abasebenzisi ukuthi bafunde futhi balalele i-Quran.
Ukuhoxiswa kwalolu hlelo kumenyezelwe nge-Apple Censorship, iwebhusayithi ebhekele lokho qapha ukunyakaza kukahulumeni wase-China ku-App Store
BBC News ngithinte onjiniyela bohlelo lokusebenza, Pakistan Management Management Services, abathi:
Ngokuya nge-Apple, uhlelo lwethu lokusebenza lweQuran Majjed Pro lisusiwe esitolo samaShayina ngoba liqukethe okuqukethwe okungekho emthethweni.
Sizama ukuxhumana ne-China Cyberspace Administration kanye neziphathimandla ezifanele zase-China ukuxazulula le nkinga.
Isizathu asicaci, ngoba uhulumeni waseChina ubheka inkolo yamaSulumane njengenkolo. Kungenzeka kakhulu, i-China Cyberspace Administration ibheke ukuthi isicelo siqukethe imibhalo yenkolo engekho emthethweni ngokusho kukahulumeni.
Uhlelo lokusebenza lweKoran Majeed Pro seluthathe umhlalaphansi kuphela kusuka ku-Chinese App Store futhi iyaqhubeka nokutholakala emhlabeni wonke, kufaka phakathi iSpanish App Store, lapho isicelo sithengiswa kuma-euro angu-14,99.
I-Quran Majeed Pro iyatholakala nge i-iPhone, i-iPad ne-Apple Watch futhi ikuvumela ukuba ufunde futhi ulalele umbhalo ogcwele we-Qur'an ngokusebenzisa izifundiswa ezidume umhlaba wonke, njengoba singafunda encazelweni yesicelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone » I-Apple iyaqhubeka nokuhoxisa izinhlelo zokusebenza ngesicelo sikahulumeni waseChina
I-Apple iqasha umphathi omusha wesoftware ukunika amandla ibanga elisha lama-HomePods